ukubukeka imodeli sika lidinga ukunakwa njalo ukwakhela kulo. Uma uthi nhlá kungase kubonakale sengathi umnikazi amafomu abanjalo bangabaphostoli Owesifazane ojabule futhi abazi lapho umuntu enezinkinga ezihambisana sibalo. Nokho, lokho akulona iqiniso.
Njengoba baphumelele emsebenzini futhi usayine isivumelwano ne umkhangisi, imodeli phuca yena kwelungelo ukuze isisindo sakhe sithi, noma ushintsho imingcele kufaka ukulahlekelwa umsebenzi, futhi njalo, isinxephezelo kanye inhlawulo-non-kuhambisana nemigomo nezivumelwano.
Esimweni esinjalo kwelinye nezikhathi zokuphila kwakhe cishe lawela umethuli Victoria Lopyreva. Waqala umsebenzi wakhe nge lesifunda ubuhle imiqhudelwano, bese wanikwa isihloko "Miss Russia-2003". Eqinisweni, kusukela ngaleso sikhathi, futhi waqala umsebenzi wakhe wokuqala njengesibonelo, bese umethuli ithelevishini. Samenyelwa ubambe iqhaza kumaphrojekthi ahlukahlukene, ngoba uhlale e iso emphakathini.
ngoba konke kwadingeka ukuba uqaphele ukuthi imodeli amafomu ezikhangayo kuvele ukuthayipha mnandi ngenkathi extra 10 kg lokhu ingenye izihloko ethandwa kakhulu eminyakeni yamuva, - Indlela mncane Viktoriya Lopyreva. Nokho, namuhla yena libukeka? efana emuva ngo-2003, futhi lo mbono ungakwazi kuphela umona! Ngakho yini imfihlo? Futhi ukuphinda impumelelo nokunqoba phezu komzimba wakhe, thina, abantu abavamile?
TV umethuli ngokwayo waqaphela ukuthi ukuzwa lo mbuzo, "Indlela mncane Viktoriya Lopyreva?" Yena asebelijwayele njalo ukuphendula ngayo injabulo, ngoba kade kakhulu wafuna indlela ephumelelayo bona.
TV umethuli akuyona fan ukudla okuqinile futhi weluleka wonke umuntu ukuba afunde ukulalela emzimbeni wakho. Akukhona sibonga ezidingekayo ezinye uhlobo Ukudla ngoba umzimba sekuyinkinga usinamathelise xaxa, uthando bese uthi "ngiyabonga" wena - lena ifilosofi imodeli abadumile. Uma azibulale eside, umzimba uqala ukugcina kilojoule noHezekeli, okuholela inqubo ukubuya.
Namuhla sizozama ukuthola impendulo yombuzo kanjani mncane Victoria Lopyreva. Into yokuqala ukuba banake izinga imikhiqizo kanye nobungako babo. Kusukela Ukudla ukuba ngakususi konke izinhlobo imikhiqizo Semi-siphelile, amaswidi, okunamafutha, okubabayo futhi konke equkethe carbohydrate elula. Khumbula ukuthi lolu hlu akuyona yini ewusizo, ikakhulukazi isibalo.
Lopyreva Victoria unciphile ngenxa yemikhawulo ngenhla futhi ukudla okuhlukene. Uyazama ukudla kaningi ngangokunokwenzeka, ngenkathi ekhonza ipuleti wakhe omncane. Enye imfihlo Ukudla umethuli kuyinto inhlanganisela afanele labo noma eminye imikhiqizo. Ngamanye amazwi, ukuhlukana kwamandla, okusekelwe etafuleni ekhethekile efakwe ohlwini izincomo ukupheka.
Mhlawumbe izwe akuyona iyiphi intombazane ababengeke owayefuna ukulahlekelwa isisindo. Kodwa ngaphambi ubuza umbuzo, indlela mncane Viktoriya Lopyreva, sibheke ipuleti yakhe abuye ahlole ngezithako zawo ngokuya ukudla okunempilo. Ukunamathela njalo le mithetho elula, ngeke kuphela ukuncipha emzimbeni kodwa futhi bathuthukise impilo yabo.
Kodwa imodeli sasikhona, kepha esinye isizathu sokuba ushintsho - uthando uyakwazi izimangaliso. Ngokuzitika umuzwa elimangalisayo omthandayo, kumane kwamasonto ambalwa iphenduka ibe indlovukazi, ukukhokhiswa ne imizwelo eyakhayo. Lapho uVictoria Lopyreva mncane, isithombe onobuhle sagcwalisa nayo yonke imithombo inthanethi nokushicilelwa, njengoba zombukiso sebhizinisi sekuyinto uhlobo ukuzwa, elakhiwe eziningi amahemuhemu mayelana impilo intombazane. By the way, akekho kubo abazange bathole isiqinisekiso esemthethweni.
Ufulawa Pea: izakhiwo ewusizo, zokupheka
Ngamajojo egazini ephikisana nokuguga, kufanele ukhokhe imali engu- $ 8,000?
Sezulu lasePoland ngenyanga kanye nesifunda
Amagilebhisi Tason: incazelo ezihlukahlukene, isithombe, ukubuyekezwa